Izinwele Zemaskhi: Ukupheka Okuzenzele, Amathiphu nokuningi! | Amadoda aSitayela
UMiguel Serrano | | Izimonyo, Ukunakekelwa komuntu siqu
Amadoda amaningi awazihluphi ngokusebenzisa izifihla-buso zezinwele. Kodwa-ke, zingumbono omuhle kakhulu uma ufuna thola inguqulo enhle kakhulu yekhanda lakho lekhanda.
Ngokuvamile izinwele zibhekene nokuhlukunyezwa okuningi kwamakhemikhali nezemvelo. Futhi elinye lamasu angcono kakhulu okulilungisa futhi ligcine liphilile yimaski yezinwele.
2 Indlela yokwenza imaski yemvelo
2.1 Isifihlaqanda seqanda
2.2 Imaski ye-avocado
2.3 Imaski ye-anyanisi
3 Amaski okuzothengwa
4.1 Inike isikhathi sokwenza
4.2 Gcina umswakama
4.3 Izinwele kufanele zihlanzeke
4.4 Yini imvamisa ekahle?
4.5 Gwema ama-sulfate nezomisi
Izitayela zezinwele zamadoda eziningi zifuna phezulu, ikakhulukazi uma kufaka i-toupee. Izimaski zezinwele zisiza ukukhulisa ivolumu, ukuminyana nobukhulu ngemuva kokusetshenziswa okukodwa. Konke lokhu kunikeza ithuba lokuthola i-toupee engenakulinganiswa.
Ukuvumelana nezimo kungenye yezimfihlo zokubonisa izinwele ezinhle. Izinwele eziluhlaza azimnandi iso noma ukuthinta. Le mikhiqizo isebenza ngokuthungwa, ishiya izinwele zithambile futhi zilawuleka, kanye nokunyakaza okuningi kunakuqala.
Ngokufanayo, buso buhlinzeka izakhamzimba eziphefumula impilo ezinweleni nasekhanda. Umphumela uba nezinwele ezinamandla, ezinamanzi amaningi futhi ezivikelekile ekuhlaselweni.
Indlela yokwenza imaski yemvelo
Ukulungiselela imaski eyenziwe ekhaya kulula kakhulu. Futhi ngokuvamile izithako iningi elinazo ekhaya ziyasetshenziswa. Futhi, udinga nje ukuwaxuba kancane usebenzisa i-mixer noma nesipuni esilula.
Lokhu okulandelayo ezinye zezimaski zesitayela zemvelo ezinhle kakhulu nezenziwe ekhaya. Owokuqala owasendulo, osuselwe eqandeni. Owesibili usebenzisa izakhamzimba ezisesithelweni nakoyela womnqumo, kanti owesithathu uqukethe u-anyanisi.
Imaski yamaqanda ingenye yezintandokazi kakhulu. Ukusebenza kwayo kufakazelwa kakhulu. Isikhupha sisiza ukulungisa izinwele (ikakhulukazi uhlobo olomile) ngenxa yokunotha kwawo emafutheni nasemaprotheni. Ngokwengxenye yayo, indima yeyogathi ukuthambisa nokuhlinzeka nge-hydration eyengeziwe.
Izithako (phinda amanani uma udinga okuningi):
Izipuni ezimbili ze-yogurt elula
Faka isikhuphasha seqanda esitsheni esincane esiseduze neyogathi yemvelo.
Hlanganisa isikhuphasha seqanda neyogathi yemvelo kahle ngosizo lwesipuni. Faka isicelo ngokushesha.
1 isipuni samafutha omnqumo
Faka zonke izithako ku-blender; noma endishini uma uthanda ukuzigaya ngesandla.
Hlanganisa izithako zemaski yemvelo uze uthole ukuvumelana okunokhilimu ngaphandle kweziqephu.
Yize kunephunga elinamandla nesidingo sokuqikelela kakhulu ukuze ingahlangani namehlo, imaskhi u-anyanisi ubongwa ngezinzuzo eziningi, kufaka phakathi ukuvimbela ukulahleka kwezinwele. Ngaphezu kwalokho, kushibhile kakhulu futhi kulula ukuyilungisa.
Gxoba u-anyanisi bese ufaka ujusi endishini encane. Cindezela u-anyanisi uma kunesidingo ukuze ukhiphe wonke ujusi kuwo.
Lesi buso asisetshenziswa ezinweleni, kodwa ezimpandeni. Ungakwenza ngephedi kakotini eyayifakwe ketshezi phambilini.
Uma uthanda, ungasebenzisa imaski eyenziwe ngomumo ukonga isikhathi nokuba newaranti echwepheshile. Imakethe inikeza izinketho eziningi ezinhle ongakhetha kuzo. Enye yazo yi- ISchwarzkopf Deep Nutrition Serum.
Enye imaski eyaziswa kakhulu yi- Umswakama Osmo Ojulile, evelele ngokuba mkhulu kunabo bonke abanye. Uma ufuna i- Isifihla-buso sokulungiswa okuzwakalayo, cabanga nge Ayikho imikhiqizo etholakele..
Inike isikhathi sokwenza
Yisebenzise ezinweleni (ngokushesha uma yenziwe ekhaya) futhi ake isebenze imizuzu eyi-10-15. Isikhathi singahluka kumamaski enziwe ngomumo. Bese ugeza bese usebenzisa i-shampoo yakho ejwayelekile kanye ne-conditioner. Bese ugeza futhi uhlobise izinwele zakho njengenjwayelo.
Uma kukhulunywa ngamamaski anezinhloso zokuthambisa, ukusiza izinwele zigcine umswakama omningi ngangokunokwenzeka, cabanga ukuwuvumela wome umoya. Musa ukugcizelela kakhulu ithawula noma, vele, ushaye umoya oshisayo ngesomisi segalelo.
Izinwele kufanele zihlanzeke
Massage imaski ibe izinwele ezihlanzekile, ugxile kuzeluleko. Uma singena kakhulu ekhanda, singakushiya sinamafutha kokunye, yingakho ukuvimbela kungcono.
Yini imvamisa ekahle?
Izimaski zezinwele zivame ukufakwa kanye ngesonto. Ukuzigqoka nsuku zonke kungangeza umswakama omningi ezinweleni zakho, kubangele ukuthi kubonakale kushelela futhi kuphume umzimba. Kepha kuya ngecala ngalinye.
Gwema ama-sulfate nezomisi
Ukuze uthole okuningi kumaski akho kubalulekile ukusebenzisa ama-shampoo angenama-sulfate nama-conditioner. Zimunca umswakama, zishiya izinwele zibuthaka futhi ziqhekeke. Kufanele futhi uqaphele lapho usebenzisa isomisi. Cabanga ukunciphisa ukusetshenziswa kwayo ngangokunokwenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Izimaski zezinwele
Umzila wokwandisa isisindo semisipha
Izinwele ezimhlophe emadodeni